Brazil oo ganaaxday Apple laba milyan oo doolar xayeysiinta marin habaabinta ah | Waxaan ka socdaa mac
Shirkadda Apple ayaa hadda waxaa ganaax lacageed oo gaareysa labo milyan oo doolar ka helay maamulka Brazil ha ku darin qalabkaaga cusub ee iibka ah, xeedho. Shirkadda Californian waxay xaqiiqadan ku dhawaaqday waqti aan sidaa usii fogeyn si looga fogaado sii deynta kaarboonka sanadka 2030. Sidan oo kale, maareeyayaasha deegaanka ee shirkaddu waxay fahansan yihiin in guryo badan oo horay u jiray ay jiraan, waana lagu dari karaa. qalabka sida Apple Watch ama AirPods.
Shirkaddu waxay go'aansatay in si loo gaaro himilooyinkeeda deegaanka oo ay u noqoto shirkad 0% kaarboon sannadka 2030, waa inay bilowdaa ha ku darin xeedho qalabka cusub ee la iibinayo. Si kastaba ha noqotee, cabirkani ma uusan jeclayn wax badan. Wadamada sida Faransiiska ayaa qaatay talaabooyin ka dhan ah iyo hada Brazil iyada oo loo marayo Procon-SP, oo ah hay'ad xakameysa ilaalinta macaamiisha reer Brazil oo fadhigeedu yahay gobolka São Paulo, ayaa ganaaxday shirkadda Apple looguma daro xeedho sanduuqa.
Qaddarka ganaaxa laftiisa muhiim ma aha. Ganaaxu wuxuu kudhowaad yahay $ 2 milyan (R $ 10,5 milyan) waana lacagtan qiyaastii 1 euro cent shirkadda. Muhiimadu waa ujeedada. Hay'adda reer Brazil waxay tilmaamaysaa inay tahay «xayeysiinta marin habaabinta ah, iibinta qalab aan lahayn xeedho iyo qodobo aan cadaalad ahayn ». Procon Waxay sheegeysaa in Apple aysan ka jawaabin markii la weydiiyay in qiimaha iPhone 12 iyo waxyaabaha kale ee la midka ah ay hoos u dhaceen ka dib markii ay ka saareen xeedho, waa maxay qiimaha iPhone uu ku jiro iyo haddii kaleba, iyo haddii uu yareeyay tirada xeedho ee soo saara.
Agaasimaha fulinta ee Procon-SP, Fernando Capez, ayaa yiri “Apple waxay u baahan tahay inay taas ka fahamto Brazil waxaa jira sharciyo iyo machadyo ilaaliya macaamiisha oo xoog badan. Waa inaad ixtiraamtaa sharciyadaan iyo hay'adahan.
Xilligan wax jawaab ah kama helin tufaax mana ogaan doonno inuu si fudud isagu bixin doono ganaaxa ama uu racfaan ka qaadan doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Brazil ayaa ganaaxday Apple $ XNUMX milyan oo doolar xayeysiinta marin habaabinta ah
Apple Music "Up Next" waxay la socotaa caalami ah fanaaniin cusub